Iminqweno yentlanzi yaseBetta okanye ye-Siam yokulwa nentlanzi | Ngeentlanzi
Los I-betta fish okanye i-siamese fighter Zizo ezo mizekelo eyaziwa ngokuziqhayisa kwaye ngaphezu kwako konke ngobundlongondlongo bazo ukuya kwezinye iintlanzi, ezo ukugcinwa kwazo kunye nokhathalelo zikhetheke kakhulu kodwa abayeki ukuba nabalandeli abanomdla ngobomi beentlanzi ezixabisekileyo.
Umgaqo wokuqala wokugcina engqondweni ungaze ubeke iintlanzi ezimbini zamadoda eBetta kwi-aquarium efanayo, bangaqala umlo wegazi de kusele omnye kuphela kuba into abanomdla kuyo kukumakisha indawo yabo. Inokuhlala nolunye uhlobo okoko ingangombala okanye umboniso kwaye ngokuqinisekileyo inoburharha njengabo.
Abafazi banokuhlala kunye kodwa bangcono kwiqelaUkubeka amabhinqa amabini eBetta kuthetha ukuba enye yazo ime njengeyona iphambili kwaye inokuba neengxaki, kuba ikhokelwa zii-hierarchies. Zihlala zincinci kunamadoda kwaye azinawo amaphiko amahle wazo.
Intlanzi yaseBetta ngumzekelo ukuba inyamekelwa kakuhle inako bayonwabele imidlalo yabo yamanzi. Banomdla kakhulu kwaye ngokubanzi bayabazi abo babakhathaleleyo. Ukuba usondela kwiglasi ye-aquarium kwaye bayabuqaphela ubukho bakho, kwaye ubeke umnwe wakho kwiglasi kwaye uyihambise ngokunyibilika, baya kulandela.
Ukuze intlanzi ibe kwindawo efanelekileyo yokuhlala, ubuncinci be-aquarium kufuneka ibe ziilitha ezingama-38, ekufuneka ineendawo zokufihla ezininzi ukuba kukho umntu obhinqileyo ongaphezulu kwesinye. Ufuna inkqubo yokuhluza kwaye zibuthathaka kakhulu kutshintsho lobushushu, ihlala ihleli ngaphandle kwe-24 kunye ne-30º C.
El Umlo we-Siam ukuba wonwabile uya kwakha izidleke zebhabhu. Ke ngoko eyona ndawo ihlala kuyo kukuba nendawo kunye nezinto ezininzi kunye nolwakhiwo kwi-aquarium enje ngezityalo, amatye ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iminqweno yentlanzi yaseBetta okanye yokulwa neentlanzi zikaSiam